Coronavirus: Japan oo xaaladdii degdegga ahayd laga debcinayo – Radio Damal
Coronavirus: Japan oo xaaladdii degdegga ahayd laga debcinayo
Japan ayaa xaaladdii degdegga ahayd ee wadanka loogu soo rogay fayraska korona awgii ka qaaday 39 gobol oo ka mid ah 47 gobol ee dalkaas, ka dib markii ay aad hoos ugu dhacday tirada dadka uu ku dhacayo fayrasku.
Xaaladda degdegga ahi waxay weli sii saarraan doontaa gobollada Tokyo, Osaka iyo jasiiradda Hokkaido ee woqooyiga ku taal oo maalin kasta qof fayraska qaaday laga soo sheegayo.
Ra’isal Wasaare Shinzo Abe ayaa sheegay in xaddiga cudurku ku fidayo ee Japan uu todoba meeloodow meel is dhimay marka la barbar dhigo sidii uu markii hore ahaa.
Wuxu ku tirtirsiyey shacabka in ay feejignaadaan oo ay xidhaan Masks isla markaana ay u hogaansamaan talada kala fogaanshaha.
“Haddii ay suurto gasho inta ka horaysa 31 May, waxaanu jecelnahay in aanu sidoo kale xaaladda degdegga ah ka qaadno gobolada kalena” ayuu yidhi Abe.
Japan waxa hore loogu dhaliilay sidii ay ula tacaashay markii cudurku ka dilaacay markabkii dalxiiska ahaa ee Diamond Princess ee ku xidhay dekadda Yokohama, laakiin waxaad moodda in cudurku ku yaryahay marka la barbar dhigo xadiga wadama Maraykanka iyo Ruushka.
Waxa la xaqiijiyey in 6049 qof uu ku dhacay oo 678 qofna u dhinteen fayraska, sida ay tibaaxday xog ka soo baxday Jaamacadda Johns Hopkins.
Dhakhaatiirtu waxay ka digeen badhtamihii bishii Abriil in adeegga caafimaadka ee Japan dumi doono hadii tirada dadka uu cudurku ku dhacayo ee mawjdaha ahi is dhimmi waydo.
Waxa sidoo kale su’aalo laga keenay heerka baadhitaanka ee xadidan ee dalka ka socday, laakiin Abe wuxu sheegay in istaraatijiyadda dalku kaga hortagay fayrasku ay meelo badan ka shaqaysay.
“Waxaanu ku guulaysanay in aanu ku xakamayno heer lagaga hortagi karo oo aanu adeegsanay qorshe ah in gobol gobol wax looga qabto” ayuu yidhi isaga oo war-fidiyeenka la hadlayey.
Hogaamiyeyaasha Japan awood sharci oo ay bandoo ku soo rogi karaan dalka malaha oo lama mid ah hogaamiyeyaasha dalalka kale. Laakiin badhaasabada gobolada ayaa ka codsan kara baayac mushtariga in ay suuqa xidhaan dadkana ka codsan kara in ay guryaha joogaan, hase yeeshee ma jirto ciqaab sharcigu dhigayo oo ay mutaysanayaan hadii ay codsigaa dadku diidaan.
In kastoo ay arintani jirto ayaa hadana xogta dalkaa laga helayey muujisay in is dhex socod dadku aad hoos ugu dhacay.